IGrounds Glamping-i-Eco-friendly Pod #1 - I-Airbnb
IGrounds Glamping-i-Eco-friendly Pod #1
Igumbi lakho lokulala e indlu encinci sinombuki zindwendwe onguGladys
Le ndawo yokurenta yothando nenoxolo ibekwe ecaleni konxweme olunamatye kwidolophu yaseBonavista, eNewfoundland. I-pod inokuhlala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezimbini, zilungele abaqhubi be-solo okanye izibini ezifuna ukuhlehla okukodwa kwindalo. Abanawo umbane. I-pod i-eco-friendly kwaye ikhanyiswa zizibane zelanga. Ipod nganye inebhedi enkulu kunye neelinen ezikumgangatho ophezulu. Iirenti zepod zincinci kwaye zisondelelene kodwa zikhululekile. Unegumbi lokuhlambela labucala kunye nekhitshi ekwabelwana ngalo kwindlu enkulu.
Iipods zakhiwe ngaphandle komphandle kunye neefestile ezinkulu ezinciphisa impembelelo yayo kwi-landscape. Iindwendwe zingabuva ubunzulu belanga & nemimoya emini kwaye zikhwankqiswe sisibhakabhaka esineenkwenkwezi ngelixa ebhedini. Emva kosuku oluchithwe kuhlolwa iBonavista, iindwendwe zinokuphumla ngaphandle kwizitulo ezimbalwa zokuphumla kwaye zithathe umbono omhle. Ngokuhlwa, iindwendwe zingosa iimarshmallows kwaye zijonge ngeenkwenkwezi kufutshane nomgodi womlilo. Indlela emfutshane emva kwepod ikhokelela kwindlu enkulu apho iindwendwe zifikelela kwizinto ezininzi zanamhlanje. Esi sakhiwo sahlukileyo 'likhaya lesizukulwana sokuqala' elibuyiselweyo. Ngamanye amaxesha kuthiwa yindlu yabahlali, olu hlobo lwekhaya lwakhiwa rhoqo ukusuka ngo-1835-1910. Eli khaya silibhale malunga no-1835. Indlu enkulu inendawo yokuhlambela eneshawa, isinki, kunye nendlu yangasese. Undwendwe ngalunye luya kufumana isitshixo sebhafu yalo yabucala. Iitawuli kunye nezinto zangasese zikhona. Ezinye izinto eziluncedo ziquka umbane, amanzi abalekayo, indawo yokupaka, kunye nokufikelela kwi-wifi. Iindwendwe zinokuziphekela isidlo sakusasa ekhitshini, kwaye zikhethe ukutya ngaphakathi kwitafile yokutyela okanye ngaphandle zijikeleze itafile yepikiniki. Ikhitshi liquka isinki, isitovu, imicrowave, ifriji, izitya kunye nezinto zokupheka.
Singathanda ukugxininisa ukuba akukho bushushu okanye umbane kwipod. Kukho umbane, ubushushu, amanzi ashushu kunye ne-wifi kwindlu enkulu. Ungahlawulisa izixhobo zakho kwikhabhathi oyinikiweyo etshixiweyo.
Ipod yimizuzu embalwa ukusuka kumalwandle acwengileyo kunye neendledlana ezingaselunxwemeni, kwaye yimizuzu nje embalwa yokuhamba ukuya edolophini yeBonavista.
Umbuki zindwendwe ngu- Gladys
Xa ufika kwipropati, izitshixo kufuneka zithathwe kwibhokisi yokutshixa ekufuphi nomnyango wangaphambili. Ikhowudi ithunyelwe kuwe nge-imeyile kwiiyure ezingama-24-48 ngaphambi kokungena. Xa uphuma nceda ubuyisele izitshixo zebhokisi yokutshixa. Ukuba kukho nantoni na evela ngexesha lokuhlala kwakho uzive ukhululekile ukuthumela umyalezo okanye umnxeba nangaliphi na ixesha.
Xa ufika kwipropati, izitshixo kufuneka zithathwe kwibhokisi yokutshixa ekufuphi nomnyango wangaphambili. Ikhowudi ithunyelwe kuwe nge-imeyile kwiiyure ezingama-24-48 ngaphambi kok…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bonavista